रोजगारीको खोजी हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने आफ्नो लागि आवश्यक जागरिक अब सरकारी वेबसाइटमै - Nepal News - Latest News from Nepal
रोजगारीको खोजी हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने आफ्नो लागि आवश्यक जागरिक अब सरकारी वेबसाइटमै
काठमाडौं,१० भदौ, । रोजगारीको खोजी हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने आफ्नो लागि आवश्यक जागरिक अब सरकारी वेबसाइटमै गएर पनि खोज्न सकिने भएको छ । सरकारले युवालाई रोजगारसम्बन्धी सूचना दिन जततउस्ररधधध।वयदपजयव।नयख।लउ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
उद्योगीहरु उत्साहित, रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन उदघाटनभएपछी
आक्रमणको घोर भत्र्सना र निन्दा